Coronaကြောင့် အလုပ်ပြုတ်သွားခဲ့ရင် ပျော်ရွှင်မှုတွေကသင့်ကိုစောင့်နေတယ် ?!? - JAPO Japanese News
ဟူး 17 Jun 2020, 16:44 ညနေ
Corona ရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုများကြောင့် စီးပွားရေးတွေရပ်တန့်သွားခဲ့ပြီး၊ ဒေဝါလီခံရတဲ့ ကုမ္ပဏီအရေအတွက်နှင့် အလုပ်လက်မဲ့များလည်း သိသိသာသာတိုးပွားလာခဲ့ပါတယ်။
အခုတစ်ခေါက် မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ ဒီ အမျိုးသား ၃ယောက်ကလည်း အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားရတဲ့ သူတွေထဲကပဲဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ရတဲ့ အထဲ Stay Home ကြောင့် အိမ်မှာနေရန်ဖိအားပေးခံရတဲ့အခါ စိတ်ရောဂါခံစားနေရမှာအမှန်ပါပဲ။
ဒါကြောင့် သူတို့သုံးယောက် အတူစုဝေးကြပြီး၊ အိမ်မှာနေတာကို ရှောင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ သို့သော် ရှောင်ရှားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့နေရာကတော့ ကျူရှူးကျွန်းဆိုတဲ့ လူမရှိတဲ့ကျွန်းဖြစ်ပါတယ်။
လူနေထိုင်မှုမရှိတဲ့ ကျွန်းပေါ်မှာ သီးခြားနေထိုင်ခဲ့ပုံရပါတယ်။
ထည့်သွားတဲ့ အရာတွေကတော့ ဒီမှာပါ။
· ကြက်အရှင်ပြီးတော့ လူမရှိတဲ့ ကျွန်းကို သွားဖို့ပြင်ပါတယ်။
သူတို့သုံးဦးစလုံး က ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှာ အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီး အလုပ်မရှိတဲ့ အတောအတွင်းမှာတော့ အိမ်မှာပဲနေနေတာကတော့ မဖြစ်ဘူး။
သို့သော်လည်း အပြင်ထွက်ရင်လည်း လူများကို အနှောင့်အယှက် ပေးသလိုဖြစ်စေသောကြောင့် လူနေထိုင်မှုမရှိတဲ့ ကျွန်းမှာနေထိုင်တဲ့ ဘဝကို ရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။
ကြည့်ရတာ ပျော်စရာကောင်းမယ့်ပုံပဲနော်။ဝါသနာအနေနဲ့ ဒီလို မကြာခဏ စခန်းချလေ့ရှိပုံရပါတယ်။ ယူဆောင်လာတဲ့ ကိရိယာများကို ရွေးချယ်ရာတွင် အထာကျတဲ့ပုံပါပဲ။
သို့သော်လည်း လူနေထိုင်မှုမရှိတဲ့ ကျွန်းပေါ်မှာ ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ မနေနိုင်သဖြင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင်မဟုတ်တဲ့ နေရာတစ်ခုကိုရှာဖွေပြီး အဲမှာပိုင်နက်မှာရှိတဲ့ ငါးဖမ်းသူများနှင့် သေချာ စကားပြောဆိုခဲ့ရာမှာ နေထိုင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
အစားအစာအတွက်ကတော့ သူတို့ပါလာတဲ့ ကြက်က နေ့တိုင်း ဥပေးတဲ့ ကြက်ဥ..
အစားအစာအတွက် နေ့တိုင်းကိုယ်တိုင်ဖမ်းလို့ရတဲ့ ငါးတွေကို စားရတယ်ဆိုတာ တော်တော်ကို အရသာရှိမယ့်ပုံပဲနော်။
၃ယောက်သား စိတ်အားတက်ကြွစွာနဲ့ စားနေကြပုံက ‌ပျော်စရာကောင်းလိုက်တာနော်။ဒါကမှ တကယ်လူ့နေ့စဉ်ဘဝလို့ ပြောရမယ့်ပုံပါ။မနက် ၉ နာရီမှာထတယ်၊ ဒါမှမဟုတ် နေထွက်လာတဲ့အခါမှာ အိပ်ယာနိုးလာမယ်။
ထို့နောက် ထင်းများကိုစုဆောင်းပြီး တစ်နေ့တာအတွက် စား‌သောက်ဖွယ်ရာနဲ့ အသုံးအဆောင်တွေကိုစုဆောင်းမယ်။
အားလပ်ချိန်မှာတော့ ရေမျောကမ်းတင်သစ် ကို ဓားသွေးကျောက်နှင့်အတူ ကြိုးနှင့်ချည်ကာ Baebell ဝိတ်တန်းမတဲ့ ကိရိယာကိုပြုလုပ်ပြီး ကြွက်သား‌လေ့ကျင့်တာတို့၊ ချွေးထုတ်ခန်းတို့ပြုလုပ်လေ့ရှိတယ်တဲ့။
ဒီလိုနေထိုင်မှု ဘဝကို စတုန်းက“ ငါယူခဲ့သင့်တယ်” လို့ထင်ခဲ့တဲ့ အရာတွေက အင်းဆက်ပိုးမွှားတွေကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့နဲ့ တေးဂီတ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
ဂူတစ်ခုကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းဖြင့် အဲဒီမှာ အိမ်တစ်လုံးဆောက်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပုံရပေမယ့် အင်းဆက်တွေတော်တော်များများရှိလို့ လက်လျှော့ခဲ့ရပါတယ်။
အဲဒီလိုအချိန်မှာတေးဂီတသာ ရှိရင်တော့ ဂီတနဲ့အတူ ချက်ပြုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ကို ပိုပြီး ပျော်စရာကောင်းစေမလား ? လို့လဲပြောပါတယ်။
နောက်ထပ် ယူဆောင်လာရန် အကြံပြုပစ္စည်းကတော့ “ ပိတ်ချောကြိုး” ဖြစ်ပါတယ်။အိမ် တို့ ချွေးပေါင်းအိမ်တို့ လုပ်ဖို့အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
အရွက်များကိုကောက် ယူ၍ လျှော်ကြိုးဖြင့်တွယ်ပြီး သူတို့ကို အဝတ်အစားများအဖြစ်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ကမ္ဘာတဝှမ်းကမီဒီယာတွေရဲ့ မေးမြန်းခြင်းခံရတဲ့ သူတို့ရဲ့ နောက်ပန်းတိုင်တစ်ခုကတော့ ဒီမှာပါ။
ကနူး ဖြင့် ကနက်ကုန်းတွင်းပင်လယ်ကို ၆၀၀ ကီလိုမီတာ ဖြတ်သန်းမယ်။
Stay Home တော့ မဟုတ်ပေမယ့် လူများနှင့်အဆက်အသွယ်ဖြတ်ခြင်းကိုရှောင်ရှားခြင်းရဲ့ အခြေခံရည်မှန်းချက်ကိုလည်း လိုက်နာပြီး ဒီ လူသုံးယောက်က ပို၍ ပင် ပျော်စရာကောင်းတဲ့ အကောင်းဆုံးနေရာကို တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ ဒီလူ၃ယောက်။
မြို့ပြဘဝကိုအဓိကထားပြီး ဖြစ်ပွားနေတဲ့ Corona မတိုင်မီနှင့် ခြားနားတဲ့ ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုကတော့ အနာဂတ်မှာ စောင့်ကောင်းစောင့်နေမှာပါ။
မြို့ပြဘဝကိုအဓိကထားသော Corona မတိုင်မီနှင့်ခြားနားသောကမ္ဘာကြီးတစ်ခုသည်အနာဂတ်တွင်စောင့်နေလိမ့်မည်။
ကိုရိုနာကြောင့် အလုပ်ပြုတ်သွားတဲ့ ၂၃နှစ်အရွယ်မိန်းကလေး။ အသက်ဆက်ရှင်သန်နေထိုင်ဖို့အတွက် ရှာတွေ့ခဲ့တဲ့ အလုပ်က ?
Corona ထက် ပိုကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေမှု !!!!
အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေတဲ့ကျောင်းသားလေး မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေ !
အပန်းပြေသွားစေမယ့် ရေပူစမ်းကျယ်ကြီး ！！
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၁၀၀လောက်က အနာဂတ်ခန့်မှန်းချက်တွေဟာ တိကျမှန်ကန်လွန်းနေတယ်!
အရသာသိပ်ရှိတဲ့ အစားအစာ? ဂိမ်း? ဘာတွေထည့်ထားမှန်းမသိတဲ့ ‌ဟော့ပေါ့ !!!
“Go To campaign” ကိုဆန့်ကျင်လက်မှတ်ထိုးကြသူ လူ ၁ သိန်းနဲ့အထက်ရှိလာ….!!!
အချင်းချင်းကူညီတတ်သော ကြင်နာတတ်တဲ့နှလုံးသား၊ Help card ကိုသုံးပါ